Bit By Bit - Ukudala ukubambisana okukhulu - 5.5.5 Be zesimilo
Isikhuthazo sokuba nesimilo sisebenza kuwo wonke ucwaningo oluchazwe kule ncwadi. Ngaphandle kwezindaba ezijwayelekile zokuziphatha-okukhulunywe ngakho esahlukweni 6-ezinye zezindaba eziphathelene nokuziphatha zivela uma kwenziwa amaphrojekthi wokubambisana okukhulu, futhi njengoba ukubambisana okukhulu kubusha kakhulu ekucwaningweni kwezenhlalakahle, lezi zinkinga zingase zingabonakali ngokugcwele ekuqaleni.
Kuwo wonke amaphrojekthi wokubambisana okukhulu, izinkinga zesikhokhelo nesikweletu ziyinkimbinkimbi. Isibonelo, abanye abantu bakubheka njengokungakhethi ukuthi izinkulungwane zabantu zisebenze iminyaka emncintiswaneni weNetflix futhi ekugcineni azitholanga isinxephezelo. Ngokufanayo, abanye abantu bakubheka njengokungabi namthetho ukukhokha abasebenzi kwizimakethe zemisebenzi ye-microtask imali encane kakhulu. Ngaphezu kwalezi zinkinga zempesheni, kunezimpikiswano ezihlobene zesikweletu. Ingabe bonke ababambiqhaza ekubambisaneni ngobuningi babe ngababhali bezincwadi zesayensi eziphelile? Amaphrojekthi ahlukene athatha izindlela ezahlukene. Amanye amaphrojekthi anika isikweletu kubulungu kuwo wonke amalungu okubambisana okukhulu; isibonelo, umbhali wokugcina wephepha lokuqala leFoldit kwaba "abadlali beFoldit" (Cooper et al. 2010) . Emndenini wemiklamo ye-Galaxy Zoo, abanikeli abakhuthele nababalulekile ngezinye izikhathi bamenyiwe ukuthi babe nama-coauthors kumaphepha. Isibonelo, u-Ivan Terentev noTim Matorny, ababambiqhaza ababili be-Radio Galaxy Zoo, babekhona ama-coauthors kwelinye lamaphepha avela kulowo msebenzi (Banfield et al. 2016; Galaxy Zoo 2016) . Ngezinye izikhathi amaphrojekthi amane ahloniphe iminikelo ngaphandle kokubambisana ngokubambisana. Izinqumo mayelana ne-coauthorship ngokusobala zizohlukahluka kusukela kweso kuya kumacala.
Vula amakholi futhi usakaze ukuqoqwa kwedatha kungaphakamisa imibuzo eyinkimbinkimbi mayelana nemvume kanye nobumfihlo. Isibonelo, izilinganiso ze-movie ze-Netflix ezikhishwe amakhasimende wonke umuntu. Nakuba izilinganiso ze-movie zingase zingabonakali zibucayi, zingabonisa ulwazi mayelana nezintandokazi zezombusazwe noma ukuziphatha ngokobulili, ulwazi amakhasimende angavumelani ukwenza umphakathi. I-Netflix izame ukubonisa idatha ukuze izilinganiso azikwazanga ukuxhunyaniswa nanoma yimuphi umuntu, kepha ngemva kwamasonto nje ukukhululwa kwedatha ye-Netflix kwaphinde kwaqanjwa kabusha ngu-Arvind Narayanan noVitaly Shmatikov (2008) (bheka isahluko 6). Ngaphezu kwalokho, ekuqoqweni kwedatha esatshalaliswe, abacwaningi bangakwazi ukuqoqa idatha mayelana nabantu ngaphandle kwemvume yabo. Isibonelo, eMiphakathini Yezincwadi ZamaMalawi, izingxoxo mayelana nesihloko esibucayi (i-AIDS) zanyatheliswa ngaphandle kwemvume yabahlanganyeli. Ayikho yalezi zinkinga zokuziphatha ezingenakunqotshwa, kodwa kufanele zicatshangwe esigabeni sokuklama sephrojekthi. Khumbula, "isixuku" sakho sakhiwa ngabantu.